Nifamahofaho ny Andro Erantany ho an’ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovana Gazety tao Karaiba · Global Voices teny Malagasy
"Tsy misy demokrasia raha tsy misy gazety miasa malalaka"
Voadika ny 10 Mey 2022 8:26 GMT
Sary ho an'ny Andro Erantany ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, nampiasàna Canva maimaimpoana.
Ny Andro Erantany ho an'ny fahalalahan'ny Asa Fanaovan-gazety, marihana isantaona ny 3 May, dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fahalalahan'ny Asa Fanaovan-gazety ary mampatsiahy ny governemanta momba ireo andraikiny amin'ny fampanajàna ny hanànana fahalalahana maneho hevitra, izay voaraikitra ao amin'ny Andinin-dalàna faha-19 amin'ny Fanambaràna Iraisam-pirenena mikasika ny Zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana. Ny lohahevitry ho an'ny taona 2022, Digital Journalism Under Siege (Asa Fanaovana Gazety Nomerika iharan'ny Fahirano), dia mandinika ny fiantraikan'ny fahalalahana miteny anaty aterineto, ny fahazoana vaovao, ny tsiambaratelon'ireo angon-drakitra sy ny fiarovana ireo mpanao gazety, eny fa na nivory nifanatrika na tamin'ny fomba virtoaly aza ireo matihanina amin'ny media maneran-tany nandritra ny fihaonambe manerantany natao tany Punta Del Este, Orogoay.
Somary lavidavitra kokoa any avaratra, any Karaiba, nomarihan'ireo matihanina amin'ny fampitàmbaovao tamin'ny fomba isan-karazany ilay andro. Ny Association of Caribbean Media Workers (ACM) dia niaiky fa na raha matetika aza ireo mpanao gazety no miasa anaty fepetra maha-be fahavalo, ny tontolo nomerika ihany koa dia mametraka azy ireo ho eo ambany ambana amin'ny resaka fiarovana an-tserasera, izay “amin'ny farany, mety hitarika hatramin'ny fahavoazana ara-batana mihitsy ho an'ireo mpanao gazety, ny loharanony, ary ny fahasimbàna na famotehana ireo fitaovany ny ny fotodrafitrasa IT (Teknolojian'ny fampahalalambaovao) ananan-dry zareo.” Nanamarika io hoe:
Miha-tandindonin-doza hatrany ny tontolo iainan'ireo mpanao gazety ao Karaiba. Na izany aza anefa, firenena maro no efa nandany lalàna iray manan-kery mba hipaingorana ireo fifandraisana sy hiadiana amin'izay heverin-dry zareo ho toy ny heloka an-tserasera. Misy ireo porofo manohana ny fiheverana fa ny lalàna mikasika ny heloka an-tserasera dia mety ho atao ho fanararaotana sy ho lasa olana eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra.
Ao amin'ireo firenena maromaro ao Karaiba, ampangaina ireo sampan-draharaham-panjakana ho nividy rindrambaiko fitsikilovana izay afaka miditra amin'ireo fifandraisana nomerika ary manohintohina ny fiainana manokana sy ireo zo hafa.
Nantsoin‘ilay vondrona ireo governemantam-paritra sy andrim-panjakana miaraka aminy mba hiantoka ny “tsy hanaovana ireo mpanao gazety ho lasibatra noho ny fikasana hamboraka ny mombamomba ireo loharanom-baovao miafina”, ary mba hifanehatra amina rafitra matanjaka kokoa ireo mpijirika informatika mahavita manakana ny ezak'izy ireo “hanimba ireo fantsona manafintohina ny sata tsy mihetsiky ny daholobe, na ny isambatanolona, ary hanelingelina araka izany ny fivezivezena malakin'ny fahamarinana mankany amin'ny olona maro kokoa”
Tsy ela akory izay, ny ACM koa dia naneho hevitra momba ny volavolana pôlitikam-pankatoavana haino-vaky-jery tao Sint Maarten, izay niantso azy io ho “mampangorintsina” sy mifanohitra amin'ireo fepetra fototry mifamatotra amin'ny fanajàna ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, isan'izany ny fahafahan'ireo media mahazo vaovao tsy misy sakantsakana, ary rehefa itarina, dia ny mponina rehetra, sy ny olompirenena”. Ny 12 Aprily no navoaka voalohany io pôlitika io :
Misy andalana ao anatin'ilay pôlitika izay manome vahana ireo fihetsika manavakavaka atao amin'olontsotra na orinasa voakendry, ary mametraka fepetra izay mety ho lasa famerana ny raharaham-barotra atao amin'ireo trano mpamoaka vaovao, faneriterena amin'ny fampandehanana malalaka ny asa fanaovana gazety ataon'ny sasantsasany amin'ireo media matianina voafantina.
Ny fampiharana ilay politika ihany koa dia mandalo amin'ireo fanombanana ny kalitaon'ny asa fanaovan-gazety ataon'ny manampahefana iray avy amin'ny fanjakàna, izay an-dalam-pametrahana ireo fetra ho an'ireo vokatra tsaraina ho tsy mifanaraka amin'ireo toromarika tsy hita fototra momba ny famoahan-dahatsoratra.
Takian'ilay fikambanana ny “fisintonana manontolo” an'ilay pôlitika sy ny “fandrafetana ny arofenitra mifanaraka amin'ny tokony ho izy ho an'ny haino aman-jery […] iarahana midinika amin'ny vondrom-piarahamonin'ny haino-vaky-jery eo an-toerana”.
Na ireo fihatsaràna, na ireo ahiahy ho an'ilay faritra dia samy misongadina ao anatin'ny Tondro Erantany Momba ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, ny farany tamin'ny navoakan'ilay fikambanana tsy miankina manaramaso ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety. Very toerana roa i Kiobà raha miohatra amin'ny toerana erantany nisy azy tamin'ny 2021 nitazonany ny laharana faha-171. Jamaika, izay amin'ny ankapobeny no faritàny tsara toerana indrindra ao amin'ilay faritra, dia very ihany koa toerana vitsivitsy ka lasa any amin'ny laharana faha-12. Nahita fivoarana kely i Goiàna, niala avy amin'ny toerana faha-51 ka lasa eo amin'ny faha-34, raha i Trinite sy Tôbagô koa dia nahita fihatsaràna – avy any amin'ny faha-31 tamin'ny 2021 ka lasa faha-25 tamin'ity taona ity.
Amin'ny maha-toy izany azy, ny Fikambanan'ireo Media ao Trinite sy Tôbagô dia nanamarika ilay fotoana tamin'ny famaritana ny mombamomba ireo mpanao gazety ao an-toerana “ho toy ny hetsika fanehoana fankasitrahana ny asan'izy ireo amin'ny fananganany sy ny fanehoany ny maripamantarana an'ilay firenena tanora, izay manana kolontsaina marolafy, amin'ny maha-feon'ireo tsy mba re, ary indrindra, noho ny nahatahirizany tamim-pitandremana fatratra ny maha-fahefana fahefatra azy. Niteny ihany koa izy momba ny olan'ireo rafitra nomerika izay mampandefitra ny fiarovana sy ny fahaleman'ireo mpanao gazety, tamin'ny fanamarihana hoe :
[…] raha tsy asiana hisatra sy tsindrin'entana ny fanarahamaso dia mety ho fitaovana iray mandidy izay handrovitra ireo zo demaokratikan'ny olompirenena mba hanana ny fiainany manokana ary ho loza mitatao amin'ireo zo, fahalalahana ary fahaleman'ireo mpanao gazety. Ny rindrambaiko fijirihana, ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy, dia hikiky sy hanimba ilay Fahefana Fahefatra sy, vokany avy eo, ny demaokrasia.
Ny fanambaràn'i MATT ihany koa niresaka manokana mikasika ireo votoatin-dalàna sasantsasany mampiady hevitra ao amin'ny firenena :
Ny Volavolan-dalàna 2017 momba ny Heloka An-tserasera, ny Lalàna fiarovana ireo Mpisintona Lakoloky, ny lalàna 2011 momba ny fiarovana angon-drakitra, ny Fitsipika Mifehy ny Onjampeo, ary ankehitriny ny volavolan-dalàna 2021 momba ny Fanararaotana Ara-Nofo (fanitsiana 3), dia mety hisy vokany ho fandresena lahatra momba ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety an-tambajotra raha toa izy ireny ka laniana tsy asiana fanitsiana amin'ny fomba manome voninahitra ny fomba fanaovana gazety.
Araka ny tenin'ilay mpanao gazety iray ao amin'ny faritra, Andy Johnson, “Tsy misy demokrasia raha tsy misy gazety miasa malalaka”